Kọlịflawa na bred creamy: uru na nsogbu, uzommeputa nke nri na oven, na pan, yana ọdịiche nke efere na ụzọ nke ije ozi - Akwukwo nri - 2020
A tọrọ ụtọ uzommeputa maka nri kọlịflawa na a creamy ihendori
Kọlịflawa na creamy sauce bụ nri dị mma ma na-edozi ahụ maka ezinụlọ dum, na-ekpokpo ụtọ anụ nke nwere ike ịgbakwunye ya na ihe dị iche iche dị iche iche, nke a na-eji dị ka efere n'akụkụ ma ọ bụ dịka efere dị iche.
Nmekere nke nkwadebe na-eme ka ọ dịkwuo mma karị. Ọ bụrụ na ịchọghị iji oge dị ukwuu na-esi nri, ma chọọ ịmere ndị ị hụrụ n'anya nri dị ụtọ ma dị mma, mgbe ahụ, sie nri kọlịflawa ahụ na ihe oriri.
Mgbe ụfọdụ, a na-ewere broccoli dị ka kọlịflawa ma ọ bụ na a na-ewere ha dịka otu na ngwaahịa ahụ, ọ bụ ezie na ha bụ ụdị abụọ dị iche iche, ọdịdị dị iche, ọdịdị na uto.
Ntụziaka na ude ihendori
Na-agbagharị na oven
Ọdịiche nke efere
Kọlịflawa n'onwe ya bụ ihe oriri.Otú ọ dị, yana ude ị kwesịrị ịṅa ntị na pasent ha iji mee ka efere dị ụtọ, ma ọ bụghị oke abụba.
Ịhọrọ kọlịflawa bụ nke kacha mma, mana mmiri oyi ga-eme. Akwụkwọ akwukwo nke kabeeji kwesiri ibu ohuru ohuru. Ụdị ahụ n'ozuzu ya ekwesịghị ikwe ma ọ bụ nkụ.
Ndị isi agaghị abụ nnukwu ma ọ bụ obere. - nkezi ga-abụ ihe ziri ezi. Ọ dịghị mkpa iwepụta kọlịflawa ma ọ bụrụ na ọ na-egosi ihe ịrịba ama ọ bụla nke ebu, aja aja ma ọ bụ oji ojii.
Ọ bụ ihe kachasị mkpa iji chekwaa cauliflowers n'ime igbe nri na refrjiraeto maka ihe karịrị izu ole na ole, ma ọ bụ ka mma - tinye kabeeji n'ime akpa mmiri, ebe ọ bụ na mmiri bụ ihe kacha emerụ ahụ na kabeeji.
Ịchekwa oge mgbe ị na-esi nri nri kọlịflawa ị nwere ike ozugbo ịdọrọ kabeeji n'ime florets mgbe ịzụrụ, tinye ya na akpa ndị nwere ike ibudata, dịka ọmụmaatụ, maka nri ụtụtụ, ma ghere. Na steeti a, a ga-echekwa kọlịflawa maka ọbụlagodi ọnwa isii, jigide ihe niile na-edozi ahụ. Banyere otú mkpụrụ kọlịflawa ahụ a kpọnwụrụ akpọnwụ si dị irè, otú e si echekwa ya na ihe ịkwadebe site na ya, anyị kọwara n'ụzọ zuru ezu ebe a.
N'agbanyeghị ọtụtụ ihe ọma dị na efere a, ya bụ:
melite mgbaze na obi obi;
ndị bara ọgaranya na vitamin B na amino acid;
ọnụ ígwè na folic acid na kọlịflawa;
mfe nke absorption site ahu na mgbochi mkpali utịp;
Tụkwasị na nke ahụ, kọlịflawa nwere ọtụtụ eriri, nke na - enye gị ohere wepu ihe ndị achọghị na ahụ.
E nwere ihe ụfọdụ a ga - eburu n'uche ma kpachara anya mgbe ị na - ewere ya:
ndị mmadụ na-ahụkarị ụdị ọrịa ahụ kwesịrị ịkpachara anya mgbe ha na-eri nri a;
ahụhụ site na interocolitis, mkpịsị ogwu na mkpasu iwe nke eriri afọ, na ndị ọrịa nwere gout na ndị na-adịbeghị anya na-eme ụdị ọ bụla nke ịwa ahụ, karịsịa n'ime akụkụ abdominal na obi, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịjụ itinye ngwaahịa ndị dị ka kọlịflawa na nri;
a ghaghị ilezi anya na efere a na ndị nwere ọbara mgbali elu;
Ọ bara uru ịkọwa na kọlịflawa nwere ike imetụta ọrụ nke thyroid gland.
Kọlịflawa dị ezigbo uru ma nwere otutu vitamin.
Mkpụrụ ume nke kọlịflawa ka esi ya na ude:
caloric ọdịnaya 300 kcal;
ndi na-edozi 6g;
vitamin C, B, A, nakwa ígwè, magnesium, phosphorus, potassium na folic acid.
Anyị na-enye ikiri vidiyo banyere abamuru nke kọlịflawa:
Kọlịflawa (mma ka ọ dị ọhụrụ) - 300 gr.
Achịcha nnu pasent nke abụba - 150 ml.
Bọta - 50 grams.
Ihe di na nwunye: nutmeg na paprika - ogwu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịgbakwunye herbs Provence.
Nke mbụ, ịkwesịrị ịkwadebe ngwaahịa:
saa akwukwo ezi ocha ahu ma kewaa ya na florets;
na efere, jikọta ude ahụ na ịcha ya na nnu.
Iji sie ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ uzommeputa ọ bụla, kọlịflawa ga-ebu ụzọ sie.
Ugbu a, ị ga-ekpebi ụzọ isi esi nri. Tụlee nke atọ n'ime ha:
akpọọ nkụ na oven;
esi nri na pan.
Kabeeji kewara n'ime mmiri na-esi nri nkeji iri na ise na mmiri na-enweghị nnu.
Griiz na mpempe mmiri na bọta, tinye kabeeji sie.
Wụsa ya na ude mmiri.
Ziga na oven na ogo 200 maka nkeji 15.
Gbanyụọ okpomọkụ wee hapụ efere ahụ iji mee ka ọ dị jụụ maka ihe dị ka nkeji 20.
Anyị na-enye ya ka esi esi nri kọlịflawa kụrụ na ude dị ka usoro ntinye vidiyo:
Enwere ike ịchọta ntụziaka maka isi nri kọlịflawa na oven n'ime isiokwu dị iche.
Kpoo bọta ahụ na pan.
Debe kọlịflawa na pan na-ekpuchi ya na mkpuchi, kpoo ihe dị ka nkeji iri abụọ.
Tinye ude na oge, nsị nke ọzọ 5 nkeji.
Mgbe stewing, kabeeji retains fọrọ nke nta niile bara uru Njirimara!
Anyị na-enye ya ka esi nri cauliflower stew na ude dị ka usoro ntinye vidiyo:
Ghichaa bọta na pan.
Ghaa na ya ka o sie ya ruo mgbe odo aja aja.
Yet kabeeji na ude na seasonings.
Simmer n'okpuru mkpuchi nke 10-15 nkeji.
Mgbe ị na-eji kabeeji ọhụrụ, jide n'aka na ị ga-esi ya. N'ihe banyere kọlịflawa kpọnwụrụ akpọnwụ, naanị ị ga-awụsa mmiri na-esi na mmiri. Ọ dịkwa uru ịmara na mgbe ị na-eme achịcha, kọlịflawa adịghị adaba uru ndị bara uru.
Ị ga-amụta otú e si esi kreduo kọlịflawa iji mee ka efere ahụ dị ụtọ ma nwee ntụpọ na-adọrọ adọrọ.
Na efere a dị mma n'ihi na ọ dị mfe iche, na-agbakwunye isi ihe ndị ọzọ ngwaahịa, dịka ọmụmaatụ:
Ọkụ Chicken. A ga-eziga ya ka ọ ṅụọ n'ọkụ tupu ọ gbakwunye kabeeji sie. Ndị ọzọ ntụziaka maka isi nri kọlịflawa na ọkụkọ, yana ozi gbasara uru na nsogbu nke ihe ndị a, nwere ike ịchọta ebe a.
Mushrooms. Nri ọka kwesịrị itinye ya na efere mmiri na kọlịflawa ma wụsa ude ahụ na seasonings. Mụta maka nhọrọ ndị ọzọ nke efere site na kọlịflawa na mushrooms site na ihe onwunwe anyị.
Chiiz. Anwere ike ichikota chiiz nwere ike ichikota ya ma obu tinye ya minit ise tupu oge agwu.
Na akwa. A na-ata ntan na whisk na ude na oge tupu ha agbapụta. Ị nwere ike ịhụ ntụziaka kacha mma nke kọlịflawa na nsen na akwụkwọ nri.
Garlic. A na-egosipụ garlic na garlic ma tinye ya na ude na oge.
Anyị ga-achọta ọtụtụ ntụziaka ndị ọzọ na-adọrọ mmasị maka nri ndị na-acha kọlịflawa, gụnyere anụ a mịrị amị, agwa agwa na zucini.
Na-eje ozi kọlịflawa na ude dị mma n'ụdị okpomọkụ mgbe a na-esi ya n'ọkụ ma ọ bụ na pan mgbe a gbanye ya. Ụdị nri dị otú ahụ ga-abụ ezigbo ntinye na azụ ma ọ bụ anụ ọkụkọ, nakwa dị ka efere dị iche iche.
Echekwala kọlịflawa ma mee ka efere dị na ya ghara ịdị na aluminom ma ọ bụ efere ígwè, dị ka ihe igwe na-esi ísì ụtọ na ihe mmiri chemical nke kabeeji na-amalite ime. Ọ kachasị mma itinye efere agwụla na akpa iko., jidesie mkpuchi kpuchie, ma ọ bụ jiri igbe pụrụ iche maka nchekwa.
Dabere na nhọrọ nke isi nri ma na-agbakwụnye oge ọkacha mmasị gị na ihe oriri, ị nwere ike ịmepụta efere ọhụrụ na-adabere na kọlịflawa na ude oge ọ bụla, na -eme ụtọ ọhụrụ iji mee ka ndị òtù ezinụlọ niile nwee obi ụtọ.